Hooyo iyo saddex gabadhood ay dhashay oo ka qalin jabiyay hal Jaamacadd (dhegayso) – Radio Daljir
Oktoobar 1, 2017 7:57 b 0
Faadumo faarax Xirsi waxaa ay ka mitahay haweenka soomaaliyeed ee dhanka waxbarashada horumarka ka sameeyay ,waxaana ay sanad ka hor ka qalin jabisay jaamacaddaha Puntland .
Saddex gabdhood oo ay dhashay faadumo ayaa mar kale sanadkaan ka qalin jabiyay isla jaamacadii ay hooyadood ka baxday sanadkii hore ,waxaana mid kamid ah gabdhaas ay kaalinta koowaad u gashay Jaamacadda Bariga afrika oo dhan.
Faaduma Faarax Xirsi ayaa iiga warrantay dareenka ku xeeran nafteeda maadama ay gaartay himilooyin ay muddo dheer sugaysay .
Axmed Sheekeeye ayaa warraystay Faadumo Faarax isagoona ugu horrayn weydiiyay waxaa ay u noqon karto bulashada tilaabada ay qaadeen iyada iyo carruurteeda.
Alshabaab oo Xalay La Wareegay Degaano Gobalka Bakool Katirsan